Foomka Oggolaanshaha Waalidka ee Kooxda Diirada Survey
Foomka Oggolaanshaha Waalidka ee Kooxda Diirada
Kusoo dhawoow foomka ogolaanshaha waalidka ee daraasada cilmi baarista kooxda diirada dugsiga sare. Mawduuca daraasada ayaa ku saabsan sida da'yartu ay badbaado ku helayaan markay safrayaan si looga dheeraado geerida iyo dhaawaca ka dhasha jidadka. Ilmahaaga waxaa lagu casuumayaa inuu ka qaybgalo kooxda diirada oo soconaysa 1 saac kadib marka dugsiga laga baxo wuxuuna helayaa kaarka hadiyad ah oo ay ku jirto $20 si loogu abaal mariyo ka qaybgalkiisa. Daraasaddaan waxaa hogaamiyo Portland Waaxda Gaadiidka (PBOT) iyo Metro.
* Maxaad doonaysaa inaad talaabada xigta samayso?
Inaan xog dheeri ah ka ogaado daraasada aan go'aasado in cunugayga ka qaybgalo iyo inkale anoo ka qoraaya foomkaan oonleenka ah. Dookhaan foomka oonleenka ah wuxuu kaliya u furan yahay waalidiinta/masuuliyiinta.
Codso in shaqaalaha kooxda diirada ila soo xiriiraan.